China Simple single drawer bedroom nightstand side cabinet # 0122 Ukwakha kanye nefektri | Yamazonhome
Ikhabethe eliseceleni kwekamelo lokulala ebusuku elincane elilula elilodwa # 0122
Inombolo imodeli: Amac-0122
Usayizi: 350mm * 500 * 580mm
Indawo efanelekayo: Igumbi lokulala, Ihhotela, Isifundo
Itafula eliseceleni kombhede wokugcina idilowa elilodwa
Zonke izinkuni eziqinile ezisezingeni eliphakeme ezikhethiwe ezisezingeni eliphakeme, eziqinile futhi eziqinile, ezizinzile futhi eziqinile, izimpahla zangempela ngentengo efanelekile, futhi zigcwele izinto zokwakha. Ubuso bekhabethe bukhulisiwe futhi bujiyile, bushelelezi futhi buthambile, kulula ukuwuhlanza. I-oak emhlophe ilwa ngqo, ngaphandle kokwesaba ukubhaphathizwa kweminyaka. Ngokuya ngezinga lamazwe omhlaba le- "anti-cracking and anti-deformation", sikhetha i-oki elimhlophe elingeniswe lisuka eNyakatho Melika, ungahlanganisi noma yiliphi ibhodi, hhayi i-shoddy, futhi wenqabe ukunamathela. Yenza kuphela ifenisha elungele abantu abavamile.
Isitoreji esinemigqa eminingi eqinile yokhuni lwekhabethe
Isikhala sokugcina esinamazinga amaningi sobabili siyimfihlo futhi sivulekile. Ukuhlanganiswa kwendawo evulekile nedilowa elivaliwe kuqinisekisa isisekelo somthamo omkhulu futhi kuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zabantu abahlukene. Itafula lonke lombhede lisebenzisa ukwakheka okuvundlile kwayo yonke impahla nezinto zokhuni, okungaqinisekisi nje kuphela ukuvumelana kwenhlamvu yezinkuni, kepha futhi kunciphisa ukuqhekeka ngezinga elikhulu, nokuyisivivinyo sokwenza umsebenzi nezinto ezidla isikhathi.
Kukhethwe i-oak emhlophe esezingeni eliphakeme laseNyakatho Melika
Idilowa elingenhla lingavalwa ukubeka izinto zomuntu siqu, amanothi edayari, amadokhumende wesitifiketi, njll. Igumbi elivulekile esitezi esingezansi lingabamba izinto zokufunda, omakhalekhukhwini, i-IPAD, njll. Ngaphambi kokulala ukuvimbela uthuli. Indawo ebanzi ephezulu ingabekwa emehlweni nakwezinye izinto zomuntu siqu.
Akukho ukumelana nokudonsa umgodi oqinile wesitimela sokhuni
Isitimela sesilayidi sokhuni oluqinile, i-push buthule kanye nokudonsa, bushelelezi futhi akukho ukumelana, gwema inkinga yokugqwala, okuhlala isikhathi eside Isibambo esiqinile se-groove isibambo silula futhi sihle, futhi ubuchwepheshe be-groove obushumekiwe bonga isikhala futhi buzizwa bukhululekile. Ububanzi be-groove buhambisana nobubanzi bomunwe womuntu, futhi kulula ukuvula nokuvala.
Ikhoneni lekhabhinethi eligobekile futhi elenziwe ngabantu
Ikhona letafula le-arc lama-degree angama-45 lipholishiwe kaninginingi ukuze lenziwe libe yisiyingi futhi libushelelezi ukuvikela amaqhubu. Ukubonisa ungahlosile, ubheke emuva kancane, kungaba yisikhathi lapho umiselwe ukuhlangana nawe. Akunasidingo sokuba yinkimbinkimbi ngamabomu, ubuyele enhlosweni yasekuqaleni futhi wenze lula ubunzima.
Imilenze yekhabhinethi eyisibindi ehlanganisa imfashini nemvelo
Amakhona ayindilinga amakhabethe wokhuni oluqinile ahlanganiswe nokufakwa ngethusi enza ukuthi aqoshwe kahle futhi azinze. Ukuhlanganiswa kwemfashini nemvelo kubonakala emininingwaneni evamile. Kusho okwemvelo ngaphandle kokuguqulwa, kugcina imikhondo yemvelo yokhuni lwemvelo, ukuthungwa kubucayi futhi kucacile, kulula futhi kungokwemvelo.
Langaphambilini Isibambo esigaxiwe esinemidwebo ephindwe kabili yombhede wombhede wekhabhinethi ohlangothini oluqinile lwekhabethe # 0121
Solid Izinkuni High futhi okuphansi Ibha sezinyawo Cafe Saddle S ...
Modern Minimalist White Oak Solid Izinkuni Coffee T ...
Amatebhe wenkukhu Breeding House Simple S ...
Umbhede we-Premium Dog House Solid Wood for Pet
Heller Animal Hutch nge Ramp Rabbit Hutch Pet ...
Itende Lesilwane Esilula Elincane Eliphakathi Naphakathi 0269